Warar - Naqshad nal cusub
Naqshadeynta Nalalka cusub
Aina Lighting waxay soosaaraysaa laydh cusub oo loo yaqaan Bright-Mate
Bright -Mate: Iftiinka la qaadan karo ee loogu talagalay ciyaarta oo ka shaqeeya meel kasta
Badeecadani waxay isku daraysaa 30W nalalka sare ee korantada, baytariyada awood-sare leh, iyo qaab-dhismeedyada taageera meel bannaan oo saddex xagal leh oo dherer ah oo dhererkiisu yahay 98mm. Aad ayey ugu habboon tahay in la qaado oo la kaydiyo. , Heeganka degdegga ah iyo munaasabadaha kale.
Badeecadani waxay leedahay nashqado badan oo casri ah, oo ku qalabaysan noocyo kala duwan oo ah hawlaha kontoroolka fog, hawlgallada soo socda waxaa lagu samayn karaa kontoroolka fog ee masaafada u dhexeysa 100m: qaybta sare ee soo saarta nalka waxay rogtaa 350 darajo si loo ogaado isbeddelka firfircoon ee iftiinka - aagga siideynta; isha iftiinka waxaa loogu talagalay muraayad nuuca shucaaca, iyada oo loo marayo hagaajinta xagasha indhoolayaasha si loo gaaro hagaajinta xagalka iftiinka nalka, iyada oo la siinayo iftiinka ugu raaxada badan xaaladaha dalabaadka kala duwan.
Naqshadeynta furitaanka qaybta hal-furaha gaarka ah waxay rogeysaa foomka taageerada dhaqameed, taasoo ka dhigeysa wax soo saarka mid ku habboon oo qurux badan in la hagaajiyo.
Iftiinka sheygan waxaa lagu hagaajin karaa dhalaalka iyo heerkulka midabka, soosaarka iftiinka ugu badan wuxuu gaari karaa 4500lm, kala duwanaanta nalka waa 10-100%, iyo kala duwanaanta heerkulka midabkeedu waa 3000K ~ 5000K.
Badeecadani waxay ku qalabeysan tahay batari lithium-ion ah oo awood leh kaas oo ku siin kara iftiin joogto ah 10 saacadood awood buuxda. Laydhku wuxuu ku qalabeysan yahay interface USB ah, kaas oo ku siin kara taageero lacag ah taleefankaaga gacanta iyo qalabka kale ee la qaadan karo.
Badeecadani waxay kuxirantahay qalab kaladuwan oo kaladuwan, waxaana jira siyaabo badan oo lagu kabo awooddiisa. Waxaa lagu soo oogi karaa iyada oo loo marayo awoodda ganacsiga, baararka qoraxda, iyo gawaarida.
Badeecada oo dhami waa 4kg oo keliya, naqshadda suunka gacantuna ku taal badeecada ayaa ku habboon in la beddelo booska wakhti kasta.
Badeecadani waxay soo bixi doontaa 2 bilood gudahood. Kusoo dhawow si aad u aragto nalalkayaga cusub